शुक्रबार संवाददाता ,बिहिबार, ०१ चैत २०७४
सर्पले टोके के गर्ने ?
साउन महिना सर्पको टोकाईबाट अस्पताल आउनेको संख्या बढ्ने महिना हो । प्रायः मानिस खेतबारीको काममा व्यस्त हुने भएकाले सर्वसाधारण सर्पको टोकाइमा पर्ने गरेका छन् । शुक्रराज शास्त्री तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपालमा बर्सेनि तराईका जिल्लादेखि सर्पले टोकेका तीन सयको हाराहारीमा उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
अध्ययनअनुसार करिब ६ प्रतिशत नेपालीमा बाँझोपनको समस्या रहेको छ । बाँझोपन महिला र पुरुष जसलाई पनि हुन सक्ने भए तापनि नेपालमा अज्ञानता र अन्धविश्वासका कारण यो समस्या महिलाहरुलाई नै हुन्छ भनेर लान्छना लगाउने गरिएको छ तर समस्या महिला–पुरुष दुवैलाई हुन सक्ने भएकाले दुवैलाई सँगै बोलाएर सोधपुछ, परीक्षण र आवश्यकताअनुसार उपचार गर्नुपर्छ ।
गर्भवती हुने सम्भावना
कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौन सम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ तर सधंँ यस्तो हुँदैन । गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । शुक्रकीट र डिम्बको मिलन हुनुपर्छ । शुक्रकीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको बेला हुनु आवश्यक छ । महिलाको डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डिम्ब निष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ ।
रक्तचाप परीक्षण गर्ने बानी तपाईंको छ कि छैन ? धेरै मानिसहरु कुनै समस्या भएर चिकित्सककहाँ वा अस्पताल पुग्दा मात्रै रक्तचाप परीक्षण गर्छन् । त्यतिबेलासम्म रक्तचाप यति उच्च भइसकेको हुन्छ कि अधिकांश अवस्थामा जीवनभर औषधि सेवन मात्रै विकल्प बन्छ ।
सेक्स शारीरिकमात्रै होइन,मानसिक क्रिया
आफ्नी श्रीमतीको यौन सन्तिुष्टप्रति तपाईंले देखाउनुभएको चासो तारिफयोग्य छ । यसले तपाईंहरूको पारिवारिक तथा यौन जीवन सुमधुर बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । किनभने, सेक्स शारीरिक क्रियामात्रै होइन, मानसिक क्रिया पनि हो ।
गर्भवती महिलाको गर्भधारणको कुल समय सामान्यतया नौ महिना एक हप्ता हुन्छ । गर्भधारणको दोस्रो त्रैमासिक यौन सम्पर्कका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र उपयुक्त मानिन्छ । यतिखेर गर्भको बच्चालाई प्रकृतिले नै पूर्ण सुरक्षा प्रदान गरिसकेको हुन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार धेरै नेपालीको बिहे २० देखि २४ वर्षमा भएको पाइए पनि महिला र पुरुषको बिहे हुने उमेरमा भने भिन्नता पाइयो । १९ वर्षसम्मको समूहमा बालिका वा किशोरीको धेरै र बालक वा किशोरको कम बिहे देखाएको छ भने २० वर्षदेखि माथिको उमेर समूहमा पुरुषको धेरै बिहे देखाएको छ ।
किन गर्ने योग
खुल्ला चौरमा हिजोआज सबेरै योग गर्नेको संख्या ह्वात्त बढेको छ । रोगले थलिएकाहरूसमेत यसले ल्याएको सुधार देखेर औषधि छोड्न हतारिन थालेका छन् तर स्ट्रोक वा हृदयघातले हानेपछि पछुताउनेको पनि कमी छैन ।
डिप्रेसन जटिल बन्यो भने सेक्स लाइफ मात्र होइन, सिंगो जिन्दगी बर्बाद हुनसक्छ । त्यसैले धेरै चिन्ता लिने र यौन सन्तुष्टि भएन भनेर थप चिन्ता बढाउने गर्नेले समस्या झनै जटिल बन्दै जान्छ । यौन सन्तुष्टिका लागि मानसिक रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
हरेक मानिसको जीवन आधार खानेकुरा हो । खानेकुराकै आधारमा मान्छे स्वस्थ वा अस्वस्थ हुन्छ । आजभोलि मानिसहरूको जंकफुडप्रति आकर्षण बढ्दो छ । चिप्सदेखि चाउचाउ, चिजबल्स तथा प्याकेटका खानेकुरा खानु मानिसहरूको दैनिकी भइसक्यो ।
कन्डम प्रयोग यौनसन्तुष्टिमा कमी आउँदैन्
स्वास्थ्यलाई हानि नपुर्याउने र दुवैलाई उपयुक्त हुने परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । कन्डम प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । यसले यौनसन्तुष्टिमा कमी ल्याउँदैन । तपाईंका लागि सबैभन्दा भरपर्दाे परिवार नियोजनको साधन कन्डम हो ।
पवित्र र स्वच्छ रजस्वला
प्रत्येक दिन विश्वभरिका करिब ८० करोड १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका किशोरी तथा महिलालाई रजस्वला भइरहेको हुन्छ । अधिकांश महिलाले आफ्नो जीवनको छ÷सात त रजस्वलामै बिताउँछन् । रजस्वलासम्बन्धी विषयको गहिराइ धेरै छ ।
यौन रोग रोग्न कन्डोम
हाम्रो समाजमा यौन खुला बहस र कुराकानीको विषय हुन सकेको छैन । त्यस्तै, यौन रोगबारे पनि पर्याप्त जनचेतना सञ्चार भएको छैन । लाज र डरका कारण यौन रोग लुकाउने चलन छ ।
दम्पतीलाई गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरामा अन्योल हुन्छ । यस विषयमा परामर्श लिन अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले उनीहरू वास्तविकताबाट वञ्चित हुन्छन् ।
प्रत्येक महिना महिलाको पाठेघरको सतहबाट रगत र अन्य तन्तु योनिको माध्यमबाट बाहिर निस्कनुलाई महिनावारी भनिन्छ ।
बच्चा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सम्भोगमा बाबुआमाको कस्तो मुड वा मनस्थिति छ भन्ने कुरामा धेरै निर्भर हुन्छ ।